खोलेपछि व्हिस्की कसरी भण्डार गर्ने?-उद्योग समाचार-गोआलोङ लिकर (समूह)
खोले पछि व्हिस्की कसरी भण्डारण गर्ने?
खोल्ने पछि व्हिस्की को एक बोतल, हावा बोतलमा प्रवेश गर्नेछ, व्हिस्कीको शरीरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। जो सक्छ व्हिस्की तरल परिवर्तन गर्न अक्सीकरण कारण। बोतलमा जति बढी हावा हुन्छ, त्यति नै बलियो ओक्सीकरण हुन्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको व्हिस्कीको एक तिहाइ मात्र बाँकी छ भने, यो हो व्हिस्की समाप्त डिंक गर्न राम्रो एक वर्ष भित्र, वा तपाईं बाँकी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ व्हिस्की सानो बोतलमा। (डन'बोतलमा मूल व्हिस्की जानकारी टाँस्न नबिर्सनुहोस्)
व्हिस्कीलाई सुत्न दिनुहोस् कि यसलाई सीधा राख्न दिनुहोस्?
चाहे यो खोलिएको होस् वा नखोलिएको होस्, तपाईंको व्हिस्कीलाई सधैं सीधा खडा हुन दिनुहोस्! अन्यथा, व्हिस्कीको शरीर कर्कको सम्पर्कमा आउनेछ, र अल्कोहलको उच्च एकाग्रताले बिस्तारै कर्कलाई क्षय गर्नेछ। व्हिस्की सम्भवतः कर्क-स्वादयुक्त छ, जुन हामीले सबै लागतहरूमा बेवास्ता गर्नुपर्छ।
के व्हिस्कीले सुत्नको लागि बत्तीहरू बन्द गर्नुपर्छ?
सिलिन्डर वा आयताकार बक्सहरूमा बेचिने धेरैजसो आधिकारिक व्हिस्की, मार्केटिङ विचारहरूका अतिरिक्त (सुन्दर प्याकेजिङ सधैं बढी मनमोहक हुन्छ), मुख्य उद्देश्य व्हिस्कीलाई प्रकाशले क्षति हुनबाट जोगाउनु हो। यदि तपाइँ कुनै प्याकेजिङ बिना व्हिस्की किन्नुहुन्छ भने, यसलाई अँध्यारो क्याबिनेटमा भण्डारण गर्नु राम्रो हुन्छ। अँध्यारोमा व्हिस्कीले बिग्रनबाट बच्न सक्छ।
अघिल्लो: व्हिस्कीको बोतल कर्कको काम के हो?
अर्को: ब्रान्डी र व्हिस्की बीचको भिन्नता